Daryeelida muddada uurka | Zanzu
Dareenka u soo jeedi waxa aad cunto.
Wax u cun si caafimaad leh: khudrad badan, khuddaar iyo xubuub (baradhada iyo rootiga) iyo waxyaabaha caanaha ka yimaada (caano iyo jiis);
Wax badan oo qayb yaryar ah cun maalintiiba beddelka dhowr cunto oo wayn (way fududahay in la dheefshiido);
Cuntooyinka qaarkood, camuuda, iyo wasakhda saxarada bisada waxay ka koobnaan karaa jeermis halis ku ah uur jiifka (khatar ah caabuqa wata cudurka laga qaado hilibka aan si wanaagsan loo karin iyo bakteeriyada laga qaado cuntadda wasakhowday):
Ha cunin ukunta qaydhin;
Ha cunin hilib qydhin ama kalluun uumi lagu bisleeyay;
Ha cunin hilib qaydhin ama hilib si dhex dhexaad ah loo bisleeyay. Dhaq gacmahaaga ka dib karista hilibka qaydhin;
Cun jiista oo cab caanaha laga iibsado subarmaarkadka (may caanaha aan ala karin);
U dhaq khudrada iyo khudaarta si wanaagsan;
Xidho galoofyo haddii aad ka shaqayso beerta ama nadiifi sanduuqa bisada la seexiyo. Ka dib gacmahaaga dhaq.
Cab biyo kugu filan (1,5 ilaa 2 litir maalin kasta).
Ha cabbin bun badan, shaah ama kookaha.
Ha cabbin khamro.
Dawooyinka, dawada iyo faytamiinada
Ha qaadan waxdawooyin ah addoon waydiin ummulisadaada, dhakhtarka haweenka ama dhakhtarka guud.
Sigaar ha cabbin.
Ha qaadan maandooriye.
Qaado faytamiinka loogu yeedho "folic acid" muddada 3 bilood ee koowaad ee uurka. Waydii ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka iyadda. Waxaad bilaabi kartaa qaadashada marka aad qorshayso inaad uuraysato. Waxaad ka iibsan xaga farmasiga ama farmasiile.
Jimicsiga iyo nolosha dibada guriga
Noqo qof firfircoon: soco, baaskiil kaxee, dabaalo, iwm.
Naso marka aad daasho.
Ka joog qorraxda.
Waxaad samayn kartaa galmo muddada uurka.
Haweenay uur leh oo galmo samaynaysa marka ay ku dul fadhido ninka.
Ballan ka samayso ummuliso aagaaga ah sida ugu dhakhsaha badan markaad ogaato inaad uur leedahay. Ummulisadu waxay xaqiijisaa uurkaaga. Haddii aad uur leedahay, ummulisada ama dhakhtarka haweenka waxa uu kula socon doonaa adiga iyo uur jiifkaaga muddada uurka oo dhan.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Daryeelida muddada uurka
Waxa la samaynayo dhacada uurka aan lagu talo gelin?